My freedom: အီစီကလီ
အိုကေ.. ဒီနေ့ပြောမှာက လူငယ်တွေကြားမှာ အလွန့်အလွန်မှ ရေပန်းစားလှတဲ့ အီစီကလီ (ခေါ်) ကျူခြင်း (ခေါ်) စမာခြင်း...
အားလုံးကတော့ ထင်မှာပဲ။ ကန်ဒီတယောက် ဒီအကြောင်းရေးမယ်ဆိုတော့ သူတော်တော်နားလည်လို့များလားလို့။ ဟဟဟ.. တကယ်တော့ အဲလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စမာတယ်ဆိုတဲ့စကားတောင် ဟိုတလောကမှ သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြောနေလို့ ကြားဖူးတာ။ မြန်မာဗန်းစကားတွေကလည်း များသား။ တခါကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ "သူက ပွမ်တယ်.." တဲ့။ ကန်ဒီနားလည်တဲ့ ပွမ်တယ်ဆိုတာက နားညည်းတယ်.. နားပူနားဆာလုပ်တယ်.. ပွစိပွစိလုပ်တယ်ပေါ့။ သူဆိုလိုချင်တာက ပွမ်တယ်ဆိုတာ ရွတာ.. ကဲတာတဲ့.. ဟဟဟ အဲ့ဒါသာ ကြည့်တော့ xD ဒါနဲ့ ပြောနေတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ? အင်း.. ကျူတယ် (အဲ့လို စာလုံးပေါင်းတာလား @_@).. အီတယ်ဆိုတာကို ကန်ဒီနားလည်ထားတာက တကယ်မဟုတ်ပဲ တကယ်မချစ်ဘဲနဲ့ ရည်းစားမကျ ဘာမကျစကားတွေပြော ဖုန်းတွေပြော ချက်တင်တွေထိုင်တာပါ။ ပထမဆုံး ကန်ဒီမေးချင်တာက ကျူတာကောင်းတယ်လို့ ထင်လား? ကန်ဒီကတော့ တော်တော်မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။ တဖက်လူက ကျူနေပေမယ့် နောက်လူက တကယ်ကြီးထင်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? တဖက်သားနစ်နာပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့သူ့ကိုအချိန်ပေးနေမှာလဲ။ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူမို့ ကြိုးစားနေတာကို ကန်ဒီမဆိုလိုပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ ကျူတာတော်တော်ရေပန်းစားတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆို ကျူနေရတာကိုတောင် ဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတဲ့သူတွေ ကန်ဒီ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးတွေ့နေရလို့ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေလည်း ကျူတယ်။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကျူတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ခံရတာက ကျူတာကိုမသိတဲ့ တဖက်လူတွေပါ။
စဉ်းစားကြည့်လေ... တဖက်လူက ရင်ထဲကမပါဘဲ ပါးစပ်ထဲရှိရာပြောနေတဲ့စကားတွေကို နောက်လူက တကယ်ကြီးတွေထင်ပြီး အပျော်ကြီးပျော်နေရအောင် တန်လို့လား? အဲတော့ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ကိုကျူနေမှန်း သိဖို့ပါ။ မသိပဲ သူပြောတာတွေယုံစားမိရင်တော့ သွားပြီပဲ။ Chat room တွေကတော့ ကျူတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက ကျက်စားရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ ကျူတာတွေလည်း အများကြီးပါ။
ဒါတွေပြောနေလို့ ကန်ဒီကို ဆရာကြီးလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျူလို့ကျူမှန်း ချက်ချင်းမသိတဲ့အထဲမှာ ကန်ဒီလည်းပါခဲ့တယ်။ ကန်ဒီ့ကို အင်တာနက်က ပထမဆုံးကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြလိုက်တာ အဲ့ဒီကျူတာတွေပေါ့။ ကန်ဒီတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်လောက်က အမေက အိမ်မှာအင်တာနက်ဆင်ပေးတယ်။ ဆင်ပေးတဲ့သူကလည်း MIRC chat room လား ဘာလား အဲ့ဒါတွေထည့်ပေးသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာတင် အင်တာနက်မှာ ဒီလိုတွေ ရှိပါလားဆိုတာ ကန်ဒီကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လိုက်တယ်။ ကန်ဒီ သင်ခန်းစာအများကြီးရလိုက်တယ်။ ကန်ဒီစိတ်ရင်းနဲ့ ခင်သလောက် လူတွေကကန်ဒီ့ကို တကယ်ခင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ တချို့ကအကောင့် ၂ခု နာမည် ၂ခုနဲ့ လူကိုလာချက်ပြီး အရူးလုပ်နေကြတယ်။ အဲ့အချိန်ကစပြီး ဘယ်တော့မှ Public chat room မ၀င်တော့ဘူး။ Gtalk မှာလည်း သိမယ်ထင်တဲ့သူပဲ လက်ခံတယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာလည်း အဲ့လိုပဲ။
ဒီနောက်ပိုင်း Gtalk မှာလာအပ်တဲ့ သူတချို့ကို ကန်ဒီ့ဆီ လာလာလည်နေတဲ့သူတွေများ ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး လက်ခံဖြစ်တယ်။ ဟိုနေ့ကပဲ စကားလာပြောတော့ ကောင်းကောင်းပြန်ပြောတာပေါ့။ နောက်တော့ သူကမေးတယ်။ Boy or Girl တဲ့... တော်တော်ရီချင်သွားတယ်။ candy ဆိုတာ Boy ဖြစ်နိုင်လား.. khine ဆိုတာကလည်း မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့များတာပဲ.. ကန်ဒီလည်း အမြင်ကတ်လို့ Boy လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး စကားလာမပြောတော့ဘူး။ မျိုးတူရင် တွန်းကန်တဲ့သဘောရှိတယ်ထင်တယ်နော် ဟဟဟ... ရီတော့ရီရတယ်။ ကိုယ်ချက်တဲ့သူရဲ့ နာမည်တောင် မကြည့်ဘူးလား မသိဘူး =.="
ကန်ဒီက လူတိုင်းကို လေးလေးနက်နက် ခင်သလောက် သူများက ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်ကြတာများတယ်။ ကန်ဒီ့ကို လာကျူတာတော့ ရှားပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သိတဲ့သူလောက် လက်ခံတာဆိုတော့။ လာလာကျူကြလို့ စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ညည်းတယ်။ ညည်းတာလား ကြွားတာလားတော့ မသိဘူး (အမှန်တွေ ပြောမိရင်သည်းခံပါ :P)။ အဲ့လိုအကျူမခံချင်တာများ လွယ်လွန်းလို့.. Profile picture တွေကို Couple ပုံတင်လိုက်.. ဒါမှမဟုတ် Cartoon ပုံတင်လိုက်.. လို့ အကြံပေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုကျတော့လည်း မလုပ်ချင်ဘူး။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ နားကိုမလည်ဘူး >.<
အင်တာနက်မှာကျူတာကို ဒီမှာတင်ရပ်ပြီး အပြင်လောကမှာ ကျူတာကိုနည်းနည်းပြောရအောင်။ အပြင်လောကမှာလည်း တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်သူရှိတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ခဏခွဲနေရတဲ့ အနေအထားပေါ့။ အဲ့ဒီလူက အဲဒီ့ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူငယ်ချင်းပဲပေါ့။ ဖေ့ဘွတ်မှာလာအပ်တော့ ကောင်မလေးက Accept လိုက်တယ်။ ချစ်သူရှိတယ်လားမေးတော့ ကောင်မလေးက အင်း.. ရှိတယ်ပေါ့။ နောက်တော့ အဲ့ဒီလူက ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားပြောတယ်။ ကန်ဒီ ဒါကိုမှားတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ချစ်တာကိုလည်း ဖွင့်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကောင်မလေးချစ်တာ မချစ်တာ လက်မခံနိုင်တာ သူ့အပိုင်းပဲလေ။ ကောင်မလေးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. သူ့မှာ ချစ်သူရှိပါတယ်ပြောတော့ အဲ့လူက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ကောင်မလေးကို ဘာပြောတယ်ထင်လဲ.. ကောင်မလေးချစ်သူမရှိတဲ့အချိန်လေးပဲ သူ့နားနေပေးပါတဲ့။ ကောင်မလေးချစ်သူပြန်လာရင် သူထွက်သွားပေးမယ်တဲ့။ ဒါကောင်မလေးကို အထင်သေးတာပဲ။ ကောင်မလေးအဆင့်က ဘယ်ရောက်သွားမလဲ စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ အဲ့အချိန်ကစပြီး ကောင်မလေးလည်း အဲ့ဒီလူကို သိပ်မခေါ်မပြောတော့ဘူး။ နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးကြားရတာက အဲ့လူက တော်တော်ရှုပ်ဆိုပဲ။ မိန်းကလေးတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်တွဲတယ်တဲ့။ ကန်ဒီ ပြောချင်တာက အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ တခြားရည်းစားမရှိတဲ့ မိန်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်... သူပြောတာတွေထဲမှာ အရည်ပျော်ပြီး သူနဲ့ကြိုက်မိမယ်ဆိုရင် မတွေးရဲစရာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုယ့်အပေါ်အလေးထားတာနဲ့ မထားတာတော့ သိသာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေကလည်း မကြိုက်နိုင်ရင် မကြိုက်နိုင်ဘူး တည့်တည့်မပြောပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး အီနေတဲ့ကိစ္စပါ။ တကယ်တော့ အဲ့လိုလုပ်တာ သူများကို ဒုက္ခပေးရာရောက်တယ်။ မချစ်နိုင်ရင် မချစ်နိုင်ဘူးပြောပေါ့။ သူလည်း အချိန်မကုန်ဘူး။ ကိုယ်လည်း အချိန်မကုန်ဘူး။ အဲ့လိုအီတဲ့လူတွေ အများကြီးနဲ့ လုံးလည်လိုက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ အဲ့လိုတွေလုပ်နေတော့ ကိုယ်ပဲသိက္ခာကျတယ်... လူပြောစရာဖြစ်တယ်လေ။
ဒီပိုစ့်ရေးလို့များ ကန်ဒီ့ကိုမုန်းကြမလား? ဒါကန်ဒီ့အမြင်သက်သက်ပါ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားရင် အားလုံးပဲ အမိုက်အမဲလေးကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ^_~
ဗိုက်ဆာနေတယ်... ဘာစားရရင် ကောင်းမလဲ... ဒါနဲ့ MIRC Chat Room တုန်းက တော်တော် ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ ကြူမိတာတော့ အများကြီးပဲ... အတည်ကြူတာပါ။ :D
ပြောရရင်လား အရှည်ကြီးပေါ့ သကြားလုံးလေးရယ် ဟင်းဟင်းဟင်း ပြောချင်ပေါင် ပြောချင်ပေါင် အဘွားကြီးလို့ပြောတာတောင် အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်ဆိုတာတောင် အန်တီလို့ခေါ်ကျူတဲ့သူရှိသေးဟ မီးမီးကြောက်ကြောက်ပါ မမသကြားလုံးရယ်ခေတ်ကလေးများ တို့အဘွားကြီးတွေလိုက်မမှီဘူးကွဲ့း)
မှန်လိုက်တာ ညီမလေးရယ် အကိုဆို နာမည်က မိန်းခလေးဆန်နေလို့လားမသိဘူး ကောင်းလေးတွေကလာအက်ပြီးကျူတာ ယောက်ျားလေးပါလို့ပြောရင်တောင်မယုံဘူး အသံကြားရမှတဲ့ ယောက်ျားလေးမှန်းသိသွားတော့ ဘလော့သွားတယ် ရီရတယ်နော်....
December 15, 2011 at 1:18 PM
ယနေ့ခေတ် ညီငယ် ညီမငယ်တွေနဲ့၊ စမ်းတ၀ါးဝါး အင်တာနက်ချက်တင်သမားတွေအတွက် တကယ်ဖတ်သင့်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ကန်ဒီရေ..။ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းချယ်ရီမြေ
ဟား ဟား ဟား ဟား... Candy အမှန်တွေချည့်ပဲပြောတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျူတာကိုတော့အားမပေးဘူး။ တစ်ဖက်က ချစ်သူရှိနေပြီဆိုရင် လူသားပီပီ နောက်ဆုတ်ပေးသင့်တယ်။ အခုခေတ်လူငယ်တွေက အီစကလီနဲ့ သူငယ်ချင်း မကွဲသလို၊ ချစ်သူနဲ့ အီစကလီ မခွဲခြားတတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သားကတော့ လူကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ မေမေကပြောလို့ လူငယ်ဟုတ်တော့ဘူး။ ဟိဟိ.. :P
ဟုတ်ပါ့ဟယ်အီစီကလီကတော့မြန်မာပြည်မှာ ကတဲကကြားဖူးခဲ့တာပါကျန်တာတွေတော့ မလေးရှားရောက်မှသိတာ
December 15, 2011 at 3:39 PM
ငယ်ငယ်က အီလွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေက ၁၃နှစ်သမီးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့လေ။ ရင့်ကျက်လာတော့ ငြိမ်သွားပါပြီ။ အကြံပေးပဲလုပ်တော့တယ်။ :P
ကန်ဒီရေ ကောင်းတယ် ဒါမျိုးတွေ အိမ်မက်လဲ မုန်းတယ်.. ကန်ဒီပြောသလို အိမ်မက်လဲ profile မှာ အတွဲပုံတင်ထားတာအေးရော .. မုန်းတယ် ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်မုန်းတာ ကိုယ့်မှာ ချစ်သူရှိရက်နဲ့ တခြားကောင်မလေးနဲ့ အပျော်ပါဆိုပြီးကျူတာလဲ တွေ့ဖူးတယ်.မုန်းလိုက်တာ အရမ်းပဲ..ကောင်းတယ် များများရေးသိလား.. ကန်ဒီရေးတာ မလွန်ဘူး ဒီထက်တောင်ရေးလို့ရသေးတယ်..အိမ်မက်လဲ တစ်ရက်တော့ ရေးဦးမှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ..ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရလွန်းလို့လေ..း) စိတ်ကြီးတယ် နော်..အဟိ ချစ်တဲ့အိမ်မက်စေရာ
မဒိုးက 'ခေတ်ကလေးများ တို့အဘွားကြီးတွေလိုက်မမှီဘူးကွဲ့' တဲ့ အဟင့်ဟင့် !_! တီတင့်အတွက် နေစရာနေရာမရှိတော့ပါလားကွယ်း))ခေတ်ရေစီးကြောင်းကအရှိန်မြင့်လို့ လိုက်မမှီတော့ဘူးသကြားလုံးလေးရေး)စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
ဟုတ်တယ်ကန်ဒီရေ.လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေပေါ့ဘလော့မရေးခင်တုန်းကတော့ပုန်းပုန်းနေရတယ်ကွယ်း))သူတို့ပြောနေတာ.မဟုတ်မှန်းသိနေပေမယ့်.block လုပ်ရမှာအားနာတာနဲ့..း)
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်သွားရင်တော့ Qတတ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေ လျော့သွားမလားပဲ....။ZaunG
ချိုလေးရေ မမကျုတာဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ခင်ချင်လို့ပါ အကောင့်လေးများမစပါအုံးလား :)ခင်တတ်တာပါနော် :D
စမာခြင်း ...တဲ့ ဟုတ်လား ..မောင်ဘုန်း လည်း လူတွေ နဲ့ ဝေးနေတော့ သူငယ်ပြောမှ သိရတယ် ...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!
December 16, 2011 at 1:23 AM
ငါသာ ငါ့ညီမေ၇ှ့ဆို ဒီပို့စ်အတွတ် လတ်ခုပ်ကို မ၇ပ်ပဲ တီးလိုက်မယ်..တော်တယ်..တင်သမျတွေထဲ ဒါကောင်းဆုံးပဲ..ဒီလိုမိန်းကလေးပီသရမယ်..။ဒါမှ ငါ့ညီမကွဟားဟားဟားဟားဟား
December 16, 2011 at 3:02 AM
ကျားကျားမမ ကျူတာတော့ ကျူကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ စည်းတွေလွတ်သွားရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့လဲ တစ်ချို့ဆို ကျူခံချင်နေကြတာလေ။ အဲဒါဆိုတော့ ကျူချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ဓါတ်ကျသွားရောဘဲ။ရပ်တန့်နိုင်အံ့မထင်။ သို့သော် မအဖို့တော့ လိုသည်။း)
သားတို့လို လူရိုးတွေက ကျုတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းသိဘူး..ကျုဆိုရင် ကျုရိုး ဘိလိယက်ထိုးထဲ့ ကျုတံပဲသိတာလေ.. (မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် နှင့်ပြောသည်)
ဟုတ်တယ် ကျူချင်တယ်လူတွေကျတော့လေ တစ်ဖတ်လူအကြောင်း ဘာမှမသိပဲ ကျူတော့တာပဲ ခက်ပါ့
အလည်အပတ်ရောက်ရှိပြီး ပွမ်တယ် ဟူသော စကားကိုမှတ်သားသွားပါကြောင်း
ကျူတာလဲ မကောင်းဘူး။ အီတာလဲ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒါတွေက ဒီဘက်ခောတ်မှာ ပိုခောတ်စားလာနေတာကို စိတ်ပျက်မိတယ်...
မမတီ တာတာက ကျူတာလည်းတိဝူး အီတာလည်းတီဝူးနော် ဟီဟီ...သေချာဖတ်သွားပါတယ် တော်တော်ကောင်းတဲ့အရေးးသားလေးပါ မကန်ဒီခင်မင်လျက်-လေလွင့်လူ
လာလာချင်း ရင်ဝဆောင့်ကန်ခံရသလားမှတ်ရတယ်ဗျာ.....:D စမာကလာလဲမလုပ်ရပါဘူးဗျာ..ကျူဖို့ဆိုတာလဲဝေးပေါ့ဗျာ...တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့် blog လေးမှာဘာတင်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်..ခပ်စုတ်စုတ် မြန်မာconnection နှိပ်စက်လို့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး Gtalk ရဲ့ connecting ဆိုတာလေးကိုပဲ ထိုင်ကြည့်နေရတာပါဗျာ...
December 18, 2011 at 3:13 AM
၀ူး...မောလိုက်တာဗျာ ကွန်မန့်ပေးဖို့နေရာတော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်ဗျာဘ ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ..အင်းဘုရားရေ..ကျူတာရော.စမာ တာပါမကျန်.အီတာ ကပါလာသေးတယ်စမန် တာရော့ပါဝူးလားဂျ..ကောင်းပါတယ်ဗျာ ဖတ်သွားပါတယ်..ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်ပြောခဲ့ချင်တာကတော့ဗျာဘာပဲလုပ်လုပ်ပေါ့လေ သတိရှိကြပါလို့ သတိကလူငိုစေင့်လျှောက်ပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာဂိုးပြီနော်...ဘ်ုင့်..ဘိုင်..ပါ......................................
မိသကြားလုံးကတော့ကြာလေ ဆရာမကြီးဖြစ်နေပါလား ကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီ ဟဟဟဟား
ဟဟဟ.. ဒူတုန်း.. ဆရာမကြီး မဟုတ်ရပါဘူးဂျာ :P
Can I beaDoll forawhile? No Emotion, Feeling & Fear...
မုန်းမေ့မရလို့ - ဆိုတေး
ခတ္တအဝေး - Bunny Phyo
အချိန်တိုင်းမင်းအတွက် - Lလွန်းဝါ
စကားလုံးတွေမလိုဘူး - ထူးအိမ်သင်
အတိတ်မေ့နေတယ် - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
Current Loving Lyric
"♫♪ ငါ့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်လိုက်တိုင်းမှာ.. မင်းပုံရိပ်တွေ အတွေးထဲရောက်လာ.. အလွမ်းတွေကြီးစိုး ငါ့ရင်ထဲမှာ.. ငါ့ရဲ့အဝေး နင်နေလို့မှ ကောင်းရဲ့လား ♫♪"
2083.. UnRar Pro-v1.5c For Android
Super Anti Spyware Professional 5.6.1020
Minilyrics 7.5.28 For Pc (1.92 Mb)
" အညာသား "
Hacking ကိုလေ့လာနေသော သူများအတွက် 155 Hacking tools
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပုံဖော်ထားတဲ့ အသီးအရွက် ဝတ်စုံလေးတွေ.....
ပညာနဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်ဟာ အရင်ရှာမလဲ
ကင်းစောင့်တို့သည် မိုးသောက်ယံကို မျှော်ဘိသကဲ့သို့...
7 Online Radio
သမီးလေး တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ
မေလ ၁၈ ရက်နေ့အတွက် တနေ့တာဆွမ်းအလှူ
~~@ မိုးး (၂ ) @ ~~
✿ The Scent of Spring ✿
Good bye... CYPRUS
"ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ ပိုစ့်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်- “သတိမမူဂူမမြင်”
You Wanna Learn Burmese, Too?
My syrian Hamster 1 year old birthday !!
Android ဖုန်းအတွက် ဆော့ဝဲကောင်းတစ်ခု
Park Shi Hoo - Rape Scandal အမှု
Interview with Dr.Yin Yin Nwe (Rakhine Commission)
ပြန်မပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ ပြန်မယူတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အကြောင်း
သူမ ဆုံးဖြတ်ချက် သိပ်မှန်လွန်းတော့လဲ ကျွန်တော့ ဘဝလေး ပါးလျှခဲ့
နှစ်နှစ်စာ ဘလော့မှ အချို့ မှတ်ချက်လေးများ
The Terminal (2004) (comedy-drama)
Liquid Eyeliner Application (for Beginners)
လျှောက်သောလမ်းမှာ . . .
မိုးရာသီ ^^^^^^^^^^^ အလွမ်းရာသီတဲ့လား
♥ ♥ မောင်နဲ့ကျွန်မ ♥ ♥
7 IN 1 Video Cutter& Joiner ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
Scribd.com က စာအုပ်တွေ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုရဲ့ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ကြားမှာ ဒီလို…ဒီလို…ရှိတယ်
တိုဟူးသုပ်၊ ဒန့်သလွန်သီးအနု၊ သခွပ်ပွင့်၊ ပေါက်ပန်းရွက်
အိုဘဲ့ .... ထမင်း
ဘယ်နက္ခတ်မျိုးနဲ့မှအလမ္ပာယ်ပြလို့မရသေးတဲ့ ပြေးလမ်းပေါ်က မီးတောက်တွေ
စာပေဟောပြောပွဲအခွေများ စုစည်းမှု (4)
ဓါးနဲ့ မွှန်းထားတဲ့ ကဗျာ~~~~~~~
"လမင်းအိမ်" စာပေနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ (မူဆယ်မြို့ ) ကောင်းမှု အလှူ 12.4.2013
မိုးကောင်းကင် ဖောင်းပြင်မှ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
Wallpaper အလန်းစားများ စုစည်းမှုပေါ့ဗျာ..
စားကြမယ့်ဟေ့ ကောင်းကောင်း - ၃၀
Photobooth for windows
ဘုရားများကို အားနာခြင်း . . .
ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေ များသင်ကြားနေ သော ဆရာမ ဒေါ်မေပုလဲ သည်
Thar Nge Song Collection
အောင်ဆန်းသမီး ရလိုက်တာ အလွန်ကံကောင်းခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စကာင်္ပူသို့ အလည်သွားရန် ဗီဇာရပြီ
ကမ္ဘာ့ စွဲဆောင်မှု အပြင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဟက်ကာ
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတိုင်း အစားသင့်ဆုံး အစားအစာများ
Electronic Re-Entry Permit (e-REP) Frequently Asked Questions (FAQs)
Non-inverting Amplifier Using op-amp
Purse and Beauty
How to: stay-all-day-eyeliner
နှစ်ကူးပိတ်ရက် ဟိုဟို ဒီဒီ.....နဲ့ ပုဇွန်သုတ်
How To Install Fonts in Amazon Kindle Paperwhite
ချစ်ညီမလေး ဘန်နီလေး မွေးနေ.မှာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်...
대구지리 (Vegetable fish soup)
Aung San Suu Kyi Fast Facts (မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သိမှတ်ဖွယ်ရာ အချက်အလက်များ)
ဓာတ်ပုံဆိုဒ်လျော့ပေးတဲ့ Photo Resizer
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အိပ်မက်က အဆိုတော်ပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အောင်လ
သင် မသိသေးတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ထူခြားတဲ့ အကြောင်း ၁၀ ချက်
♥ ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးပါ ♥
၃နှစ် မပြည့်ခင် အရွယ် သားသား
Pastel Chalk နဲ့ ဆံပင် အရောင်ဆိုးကြမလား?
Fancy Idol of Celebrity (ဒီရေတိုး)
Diamond Jubilee Day (2)
A trip to Statue of Liberty and Ellis Island
Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 11.0.322 with DVD Architect Studio 5.0 Build 156 Keygen
ဇောငျး​@Thinking on the Blog I [̲̅C̲̅α̲̅и̲̅'т̲̅] [̲̅S̲̅т̲̅σ̲̅ρ̲̅] [̲̅T̲̅н̲̅ι̲̅и̲̅к̲̅ιи̲̅g
စိတ်ကူးထဲ ပေါ်လာသမျှ ချရေးမိသော အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ 
Bye beloved readers
“ လူညံ့ တယောက်ရဲ့ ခရီးလမ်း ”
စက်ဆန်းပေါက်ကွဲမှုအလှုပြီးစီးခြင်း ( ၁ ) (ဓါတ်ပုံ + အင်တာဗျူးအသံဖိုင်)
My Idea Is My Life
အသုံးဝင်မဲ့ English to Myanmar Dictionary လေးတွေပါ
last day in japamala resort
My Twitter Update^^